Crossroads Inn: zita rekufungidzira rinouya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Crossroads Inn: zita rekufungidzira kuuya kweLinux
Kana iwe uri mudiwa wemavhidhiyo mitambo zvichienderana nezviitiko zvakapfuura uye nyika dze kufungidzira, Crossroads Inn ndiwo mutambo wevhidhiyo wauchada. Zvakare, yanga iri mari paKickstarter, asi iri kuuya yeLinux, iri nhau dzakanaka kwatiri tese. Iyo simulator yethavern yatinozo fanirwa kubata, ine magirafu uye nekuchenjerera ruzivo rweiyi vhidhiyo mutambo uyo unotidzorera isu kumashure kune mashiripiti apfuura.
Crossroads Inn inokurega iwe uchitamba se muridzi wetavern yako yemuno mumoyo wenhoroondo inonakidza uye inonakidza nyika yeDelcrys. Uchave uine mamwe matambudziko, sekupona kumatambudziko ehupfumi uye nemamiriro anozopihwa mukati memutambo wevhidhiyo. Iwe wakanyudzwa mune zvakasikwa padyo nemipendero yeumambo hune simba uye uchafanirwa kubata nezvose zvinouya nenzira yako, uye shandura bhizinesi rako rive nani.
Izvo zvakarongwa kugadzira mitambo yemitambo yakawanda, senge nyaya kana mushandirapamwe wakavakirwa, sandbox, nezvimwe. Ivo vese vari pasi pehumwe hunhu hwakataurwa mundima yapfuura. Zvinotaridza, kubva pane data iro riripo, kuti uchave musanganiswa unokatyamadza pakati pemaneja wekuvaka kana simulator uye mutambo wevhidhiyo Iyo Sims, kwaunogona zvakare kuyanana nevatambi uye uine hunyanzvi hwekuita shamwari, kuwana chivimbo, nezvimwe. Pasina kupokana, musanganiswa wekuda kuziva unogona kunakidzwa nevatambi.
Asi kwenguva, isu tinofanirwa kumirira, iyo vanhu vazhinji yabudirira, mushandirapamwe wakapera munaKurume, nemari inopfuura $ 38.000 yakakwidzwa. Muchikamu cheFAQ, zvinotsanangurwa kuti ichauya yeLinux, chiteshi chakarongerwa chikuva ichi. Tinogona zvakare kuona ruzivo mu lkune Steam peji, iyo inoratidza SteamOS + Linux sezvinodiwa ... Tinofanira kungomirira kuti itangiswe imwe nguva muna 2019.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Crossroads Inn: zita rekufungidzira kuuya kweLinux
Flatpak inova yakavakirwa pane iyo FUSE faira system
Xen Project Hypervisor 4.12: Nyowani Nhau dzeVirtualization